Nepali Christian Bible Study Resources - मनोरञ्जनको परीक्षण
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » मनोरञ्जनको परीक्षण
पद कण्ठ: भजनसङ्ग्रह १०१:३; रोमी ६:१६; १ कोरिन्थी १०:२१;३१; फिलिप्पी ४:८; १ यूहन्ना ५:२१
बाबुआमा तथा शिक्षकहरूले युवाहरूलाई मनोरञ्जनसित सरोकार राख्‍ने बाइबलीय सिद्धान्तहरूलाई सिकाउनुपर्छ। मानिस परमेश्वरको सृष्टिमा आनन्द गरोस् भनेर ऊ बनाइएको हो। परमेश्वरले "हाम्रा आनन्दका निम्ति हामीलाई सब थोक प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ" (१ तिमोथी ६:१७)। तर सृष्टिको पतन हुन गयो र त्यसमा थुप्रै आत्मिक खतराहरू रहेका छन् (१ पत्रुस ५:८)। कतिपय क्रियाकलापहरू आफैमा बाइबल विपरित नहोलान् तर तिनमा समेत कति त फाइदा नदिने कुराहरू हुन्छन् (१ कोरिन्थी ६:१२)। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा ती कुराहरूलाई परीक्षण गर्न सिक्नुपर्छ ताकि हामी बुद्धिका साथ हिँड्न सकौं, मूर्खतामा होइन।
युवाहरूलाई केवल "यो गर्न हुन्छ, त्यो गर्न हुँदैन" मात्र भनेर गर्न हुने र नहुने कुराहरूको एउटा सूची दिएर मात्र हुन्न। उनीहरूलाई हामीले ध्यानपूर्वक र धैर्यपूर्वक परमेश्वरको वचन व्यावहारिक किसिमले सिकाउनुपर्छ ताकि उनीहरूले ती वचनका पाठहरू दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न जान्न सकून्।
ख्रीष्टियन जीवनमा र ख्रीष्टियन परिवारमा मनोरञ्जनलाई परीक्षण गर्न मिल्ने केही बाइबलीय सिद्धान्तहरू निम्न प्रकारका छन्। प्रत्येक बुँदा अन्तर्गत आफैलाई निम्न प्रश्न सोध्नुहोस्: यस परीक्षणमा विफल ठहरिने मनोरञ्जनका केही रूपहरू अथवा उदाहरणहरू के-कस्ता हुन सक्छन्?
के यसलाई तपाईं परमेश्वरको महिमाको लागि गर्न सक्नुहुन्छ? (१ कोरिन्थी १०:३१)
के यो कुरा संसारबाटको हो? (१ यूहन्ना २:१५-१६)
के यसमा खराब कुराहरू हेर्ने काम पनि हुन्छ? (भजनसङ्ग्रह १०१:३)
के यसले सुसमाचार र ख्रीष्टको कामलाई अगाडि बढाउँछ? (१ को १०:२८,३२-३३)
के यसले अरूहरूलाई ठेस खुवाउँछ? (रोमी १४:१३-१६,२१)
के यसले तपाईंलाई हितकर (स्वस्थकर) कुराहरूमा मन लगाउने बनाउँछ? (फिलिप्पी ४:८)
के यो कुरा मूर्तिपूजासँग आवद्ध छ? (१ यूहन्ना ५:२१)
के यो कुरा व्यभिचारसित सम्बन्धित छ? (१ कोरिन्थी ६:१८)
के यो कुरा शैतानबाटको हो? (१ कोरिन्थी १०:२१)
के यसले भक्तिहीनहरूको विचारधारालाई प्रोत्साहन दिन्छ वा त्यसको समर्थन गर्दछ? (कलस्सी २:८)
के यो कुरासित त्यस्तो कुनै पनि कुरा सम्बन्धित छ जुनचाहिँ परमेश्वरको साँचो ज्ञानको विरुद्धमा छ (२ कोरिन्थी १०:५)
के यो क्रियाकलाप तपाईं बिनाशङ्का विश्वासका साथ गर्न सक्नुहुन्छ? (रोमी १४:२३)
के यो क्रियाकलाप मेरो समयको सदुपयोग हुने काम हो? एफेसी ५:१५-१६)
के यस क्रियाकलापले मलाई दास बनाउन सक्ने सम्भावना छ? (रोमी ६:१६-१८)
« जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग ३)
ख्रीष्टियन जीवन र दुःखकष्टहरू (#१) »